Asikwazi ukusho ngokuqiniseka ukuthi amakhono emkhakheni ubuchwepheshe okusezingeni eliphezulu manje sisikhulu. Futhi ezinye izinkampani edumile emhlabeni wonke bazimisele ukukhokhela imali umxhwele. Ufuna ukufunda mayelana lapho siyonikwa kakhulu? Ukuhlaziywa amayunithi million amathathu nanhlanu idatha iholo kusukela imisebenzi eminingi kwezinkulungwane eziyikhulu, kwathiwa evezwe esithombeni pretty kucacile ukuthi kwenzekani ezingeni ubuchwepheshe okusezingeni eliphezulu, kanye lokho okungalindelwa yabanesithakazelo. Ngezansi uzothola eziphezulu ezinkampanini Ten bazimisele ukukhokha abantu abaningi abanamakhono afanele emkhakheni IT. Ungase uthande ukuzama isandla sakho at omunye wabo, ngoba imivuzo ukuthi sipho ngempela kuwufanele umzamo.
Le sevisi ukubhuka inthanethi at zokudlela kusekelwe e-San Francisco. inkokhelo Isilinganiso ikhokhwe kukhona zamadola inkulungwane namakhulu amabili namashumi amahlanu nanye ngonyaka, kanti ezingeni esiphezulu nomholo aze abe ngaphezu kuka enamandla eyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu.
Lokhu yokuxhumana eligxile umsebenzi wabantu, yasungulwa ngo-2002. Manje, usebenza khona, uzothola i-isilinganiso mayelana namakhulu amabili namashumi ayisithupha ayizinkulungwane zamaRandi ngonyaka, benethuba amaholo ukukhula ukuze uthole enye i ayizinkulungwane ezingamakhulu.
Lokhu giant lobuchwepheshe yasungulwa eminyakeni 42 edlule, ngo-1975, e-Washington. Uma uke wahlala khona emsebenzini, uzothola omunye namashumi ayisithupha ukuba amadola amathathu abayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili.
I yokuxhumana, okuvumela ukuqasha indlu izihambi, ekomkhulu e-San Francisco. Umholo esiphezulu kukhawulwe amathathu namashumi ayisihlanu nezinkulungwane, kodwa okungenani mayelana amabili namashumi ayizinkulungwane zamaRandi ngonyaka.
Isayithi lapho ungaba nabanye abasebenzisi kusuka izithombe zakho ozithandayo, wethulwa esanda kutholakala - ngo-2010. Real lapha imayelana kuyafana Airbnb.
IHhovisi yokuxhumana esikhulu kunazo zonke emhlabeni itholakala eCalifornia. Komholo lapha kufana nokuthi amabili namashumi ayisikhombisa nanhlanu zamaRandi ngenzuzo yonyaka.
Le nkampani yezokuthutha yatha- eminyakeni yamuva, yize ke yasungulwa ngo 2009. Ngenxa yalokho, uma babuyele emsebenzini njengoba i-IT-chwepheshe, uzothola i-avareji zamadola namakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili izinyanga eziyishumi nambili.
isitoreji Izikhungo ifu Online wethulwa 2007 futhi uye waba umholi kulo mkhakha. Manje, uma uke wahlala khona ukusebenza, ungalindela ngokwesilinganiso zamadola, iyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngonyaka.
Enye inkampani yezokuthutha kohlu, okuyinto okhokhela abasebenzi IT imali engakholeki. Uma uthole umsebenzi khona, ngizothola dollar ayinkulungwane okungenani amabili namashumi amabili ngonyaka, isilinganiso somholo kukhona amadola na bengamakhulu amathathu amawaka.
Iningi imali IT-ongoti ukuthola uma basebenza enkampanini ukuzijabulisa strimingovoy based eCalifornia. Lapha, umholo wonyaka zamadola amathathu namashumi ishumi elinambini lamawaka, kanye ophahleni ilingana dollar amawaka, anamakhulu mane eziyisithupha futhi.
Office "ku-Yandex" e Moscow, incazelo, imininingwane yakho yokuxhumana
Ka-52 "Alligator" - bokusungula ukwesekwa indiza